Blog of Nyein Chan Yar: 2010.03
Posted by dathana at Wednesday, March 24, 2010 No comments:
စာရိုက်ရမှာ ပျင်းနေလို့ စိတ်ထဲမှာပဲ ရေးနေတာ ကြာပြီ။ ဒီရက်ပိုင်း အရမ်းကို lonely ဖြစ်နေတော့ ဘာလုပ်ဖို့မှလည်း mood မရှိဘူး။ ဘာမှလည်း
အဆင်မပြေဘူး။ ဒါတွေလည်း ပြေါမနေချင်တော့ပါဘူး။ ဟိုတစ်နေ့က သီချင်း အဟောင်းလေး တစ်ပုတ် ဘာသာပြန်ကြည့်ထားတာ။
Evenesence ရဲ့ "Bring Me To Life" လေ။ ဖတ်ကြည့်ပေးကြပါအုံး။ (it is not line by line translation.)
ခံစားချက်တွေလည်း အေးခဲပြီး ရင့်ရော်သွားတယ်၊
ငါ့ဝိညာဉ်ရဲ့ အတွင်းဆုံးအမှောင်မှာ ဝဲလှည့် ၊
တိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့ အတူ ငါ့ကိုယ်ငါ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ပိတ်လှောင် နေခဲ့မိပြီထင်ရဲ့။
ငါ့ကိုငါ လွင့်ပြယ် ပျောက်ဆုံးနေချိန်မှာ
မင်းတစ်ယောက်သာ ခြေသံဖွဖွနဲ့ ရောက်ရှိလာတယ်။
နောက်ပြီး ငါ့ရဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ မျက်ဝန်းတံခါးကနေ
စိတ်ရဲ့ အတွင်း ဆုံးထိ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး
ငါ့ကို ဒီအမှောင်ထဲက နိုးထစေပါတော့ အချစ်လေးရေ
ငါ့ရဲ့သွေးတွေ စီးဆင်းဖို့ အမိန့် ပေးပါအုံး
မရှိခြင်းတွေထဲမှာ ပျောက်ဆုံးနေသူကို ကယ်တင်သူရေ။
မင်းရဲ့ ထိတွေ့မှုနဲ့ အချစ်မရှိသရွေ့
ရင်ထဲမှာ အေးခဲ ရပ်တန့်နေတယ် ။
ဘာမှ ယုံကြည်စရာ မရှိလောက်အောင်
နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်စာလောက် အိပ်မောကျနေရသူကို
မင်းမရှိလို့ ခံစားချက်ဝိညာဉ်တွေ ပျက်သုန်း
သေသူတစ်ယောက် အဖြစ် မထားခဲ့ပါနဲ့
it is not line by line translation. how is it?
စာရိုကျရမှာ ပငျြးနလေို့ စိတျထဲမှာပဲ ရေးနတော ကွာပွီ။ ဒီရကျပိုငျး အရမျးကို lonely ဖွဈနတေော့ ဘာလုပျဖို့မှလညျး mood မရှိဘူး။ ဘာမှလညျး အဆငျမပွဘေူး။ ဒါတှလေညျး ပွောမနခေငျြတော့ပါဘူး။ ဟိုတဈနကေ့ သီခငျြး အဟောငျးလေး တဈပုတျ ဘာသာပွနျကွညျ့ထားတာ။ Evenesence ရဲ့ "Bring Me To Life" လေ။ ဖတျကွညျ့ပေးကွပါအုံး။
ခံစားခကျြတှလေညျး အေးခဲပွီး ရငျ့ရျောသှားတယျ၊
ငါ့ဝိညာဉျရဲ့ အတှငျးဆုံးအမှောငျမှာ ဝဲလှညျ့ ၊
တိတျဆိတျွခငျးနဲ့ အတူ ငါ့ကိုယျငါ နကျနကျရှိုငျးရှိုငျး ပိတျလှောငျ နခေဲ့မိပွီထငျရဲ့။
ငါ့ကျိုငါ လှငျ့ပွယျ ပြောကျဆုံးနခြေိနျမှာ
မငျးတဈယောကျသာ ခွသေံဖှဖှနဲ့ ရောကျရှိလာတယျ။
နောကျပွီး ငါ့ရဲ့ ဖှငျ့ထားတဲ့ မကျြဝနျးတံခါးကနေ
စိတျရဲ့ အတှငျး ဆုံးထိ ဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး
ငါ့ကို ဒီအမှောငျထဲက နိုးထစပေါတော့ အခဈြလေးရေ
ငါ့ရဲ့သှေးတှေ စီးဆငျးဖို့ အမိနျ့ ပေးပါအုံး
မရှိခွငျးတှထေဲမှာ ပြောကျဆုံးနသေူကို ကယျတငျသူရေ။
မငျးရဲ့ ထိတှမှေု့နဲ့ အခဈြမရှိသရှေ့
ရငျထဲမှာ အေးခဲ ရပျတနျ့နတေယျ ။
ဘာမှ ယုံကွညျစရာ မရှိလောကျအောငျ
နှဈပေါငျး တဈထောငျစာလောကျ အိပျမောကနြရေသူကို
မငျးမရှိလို့ ခံစားခကျြဝိညာဉျတှေ ပကျြသုနျး
သသေူတဈယောကျ အဖွဈ မထားခဲ့ပါနဲ့
Posted by dathana at Sunday, March 14, 2010 No comments:
Labels: emotional, song
ဟိုတစ်နေ့က Slashdot က post တစ်ခုမှာ တွေ့တာလေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ အသက်ကြီးလာရင် အချိန်တွေကုန်တာ မြန်တယ် ငယ်ငယ် တုန်းကလိုမဟုတ်ဘူး လို့ ပြေါကြတယ်လေ။ တကယ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်ဆို ၁၀တန်းရောက်တဲ့ထိ ၁၀နှစ် လောက်ကာလဟာ အကြာကြီးရှိခဲ့သလိုပဲ။ အခု အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်မှာ ၁၀နှစ်က ခဏလေး ဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ ကုန်သွားရော။
သူတို့ research တွေအရ အယူအဆ နှစ်ချက်ရှိတယ်တဲ့။
အယူအဆ ၁။ အသက်ကြီးလာရင် ဦးနှောက်ထဲက clock speed ကနှေးသွားတယ်။ လူငယ်တွေကို စိတ်ထဲကနေ တစ်မိနစ် ပြည့်လောက်တဲ့အချိန် မှန်းပြီး ပြေါခိုင်းတော့ စက္ကန့် ၆၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက် မှာ ပြေါကြတယ်။ အသက်၇၀လောက် လူကြီးတွေကျ စက္ကန့် ၉၀လောက် မှာပြေါကြတယ်။
အယူအဆ ၂။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အရာရာဟာ အသစ်အဆန်း တွေမို့ ဦးနှောက်ထဲကို ရေးမှတ်ရတာတွေ အများကြီးပဲတဲ့။ အဲတော့ အများကြီးပေါ့။ ကြီးလာတော့ တွေ့ကြုံပြီးသားတွေဆိုရင် ဦးနှောက်ထဲကို ထပ်ရေးစရာ မလိုတောဘူးတဲ့။ (data တူတာတွေစုပြီး compress လုပ်တဲ့ algorithm မျိုး ယူဆကြပုံရတယ်။ :P ) အဲတော့ အချိန် တွေတိုတယ်လို့ ခံစားရတယ်တဲ့။
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ။ ကျွန်တော်ဆို အသက် ၂၀ နဲ့ ၃၀ ကြားဆို အတွေ့အကြုံအသစ်က အရမ်းများတယ်။ နိုင်ငံခြါးမှာ လူမျိုးခြါးတွေ၊ စကားအသစ်တွေပြေါရ၊ ပညာရပ် အသစ်တွေ လေ့လာရ၊ အခက်အခဲတွေ ကြုံရ ဖြေရှင်းရ။ စုံနေတာပဲ။ ၁၀တန်းမတိုင်ခင်ကဆို ဒီကျောင်း ဒီစံနစ် ဒီလူ ဘာမှ ထူးခြါးတာ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ၁၀တန်းရောက်တဲ့ထိ ၁၀နှစ် လောက်ကာလဟာ အကြာကြီးရှိခဲ့သလိုပဲ။ ၂၀ နဲ့ ၃၀ ကြားကာလက မြန်သလိုပဲ။ အဲတော့ အယူအဆ ၁ ကပိုပြီး မှန်မှာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား။ What do you think? Let me know your opinion.
အယူအဆ2ဆိုရင်တော့ ခရီးတွေဘာတွေ သွားရင် အဖြစ်အပျက်တွေများတော့ ၂ ရက်ကြာတာကို ၃ ရက်လောက်ကြာတယ်လို့ ခံစားရတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။
ဟိုတဈနကေ့ Slashdot က post တဈခုမှာ တှတေ့ာလေးပါ။ ကြှနျတျောတို့ အသကျကွီးလာရငျ အခြိနျတှကေုနျတာ မွနျတယျ ငယျငယျ တုနျးကလိုမဟုတျဘူး လို့ ပွောကွတယျလေ။ တကယျပါပဲ။ ကြှနျတျောဆို ၁၀တနျးရောကျတဲ့ထိ ၁၀နှဈ လောကျကာလဟာ အကွာကွီးရှိခဲ့သလိုပဲ။ အခု အသကျ ၃၀ ဝနျးကငျြမှာ ၁၀နှဈက ခဏလေး ဖွုတျဖွုတျနဲ့ ကုနျသှားရော။
သူတို့ research တှအေရ အယူအဆ နှဈခကျြရှိတယျတဲ့။
အယူအဆ ၁။ အသကျကွီးလာရငျ ဦးနှောကျထဲက clock speed ကနှေးသှားတယျ။ လူငယျတှကေို စိတျထဲကနေ တဈမိနဈ ပွညျ့လောကျတဲ့အခြိနျ မှနျးပွီး ပွောခိုငျးတော့ စက်ကနျ့ ၆၀ ပတျဝနျးကငျြလောကျ မှာ ပွောကွတယျ။ အသကျ၇၀လောကျ လူကွီးတှကြေ စက်ကနျ့ ၉၀လောကျ မှာပွောကွတယျ။
အယူအဆ ၂။ ငယျငယျတုနျးကတော့ အရာရာဟာ အသဈအဆနျး တှမေို့ ဦးနှောကျထဲကို ရေးမှတျရတာတှေ အမြားကွီးပဲတဲ့။ အဲတော့ အမြားကွီးပေါ့။ ကွီးလာတော့ တှကွေုံ့ပွီးသားတှဆေိုရငျ ဦးနှောကျထဲကို ထပျရေးစရာ မလိုတောဘူးတဲ့။ (data တူတာတှစေုပွီး compress လုပျတဲ့ algorithm မြိုး ယူဆကွပုံရတယျ။ :P ) အဲတော့ အခြိနျ တှတေိုတယျလို့ ခံစားရတယျတဲ့။
ကြှနျတေျာ့အမွငျကတော့ ကြှနျတျောဆို အသကျ ၂၀ နဲ့ ၃၀ ကွားဆို အတှအေ့ကွုံအသဈက အရမျးမြားတယျ။ နိုငျငံခွားမှာ လူမြိုးခွားတှေ၊ စကားအသဈတှပွေောရ၊ ပညာရပျ အသဈတှေ လလေ့ာရ၊ အခကျအခဲတှေ ကွုံရ ဖွရှေငျးရ။ စုံနတောပဲ။ ၁၀တနျးမတိုငျခငျကဆို ဒီကြောငျး ဒီစံနဈ ဒီလူ ဘာမှ ထူးခွားတာ မရှိဘူး။ ဒါပမေယျ့လညျး ၁၀တနျးရောကျတဲ့ထိ ၁၀နှဈ လောကျကာလဟာ အကွာကွီးရှိခဲ့သလိုပဲ။ ၂၀ နဲ့ ၃၀ ကွားကာလက မွနျသလိုပဲ။ အဲတော့ အယူအဆ ၁ ကပိုပွီး မှနျမှာပေါ့။ မဟုတျဘူးလား။ What do you think? Let me know your opinion.
အယူအဆ2ဆိုရငျတော့ ခရီးတှဘောတှေ သှားရငျ အဖွဈအပကျြတှမြေားတော့ ၂ ရကျကွာတာကို ၃ ရကျလောကျကွာတယျလို့ ခံစားရတာမြိုး ရှိတတျပါတယျ။
Posted by dathana at Wednesday, March 10, 2010 No comments: